နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: လူ့၊ လူ၊ လူး....။
khin oo may November 16, 2008 at 2:12 AM
Ko Boyz November 16, 2008 at 2:31 AM
ဘာကို မနာလိုပါသနည်း...။ ရှင်းပြပါ...။
khin oo may November 16, 2008 at 3:09 AM
Ko Paw - 11/14/08 2:06 PM
သဘောတရားခြုံပြောတာပါ။ ကိုဘွါိုက်ပိုစ် က ၂ ပုဒ်လုံးကောင်းနေတော့ ကိုယ့်ပိုစ် ထမင်းကြော် အိုးလေးပြန်ကြည့်ပြီးအားငယ်မိတယ် သူ့ပိူစ် ကဘာလို့ကောင်းနေရတာလဲ။ ငါကကော ဘာလို့များအဲလို မရေးနိုင်တာလဲ လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးမနာလို ဖြစ်တယ် လိဲု့ပြောတာပါ.
(တကယ် မဖြစ်ပါဘူး ဘာဖြစ်မရာ မှတ် လို့ တို့က နာမည် ပိုကြီးတာဘဲဥစ္စာ)
khin oo may November 16, 2008 at 3:10 AM
ksanchaung November 16, 2008 at 3:13 AM
ရင်ကိုလည်း ခွဲမကြည့်ရဲပါ။ အမူးသမားများလည်း ကြောက်တတ်ပါသည်။ နားလည်သလောက်ပြောရရင်ဖြင့် အိုင်းစတိုင်းနှင့် လုံးဝဆိုလုံးဝ မတူ။ အက်ဒီဆင်လိုလည်း ဘယ်သောဘယ်အခါမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်။ လူသာမာန်ဟု အတိအလင်း ကြေညာသည့်အတွက်သာ တစ်ခွက်တစ်ဖလားတိုက်ရင်း မူးရတဲ့ဒုတ်ခကို အမှတ်ရစေချင်ကြောင်း အသိပေးရင်း . . . ။
ခေတ်မကောင်း စလုံးရေးစ -ORC-
Ko Boyz November 16, 2008 at 3:15 AM
ဟားဟား.. အမ်းမားက ပိုပြီး ယေဘုယျ ကျကျ၊ ယထာဘူတကျကျနဲ့ ဆင်ဖြင် သုံးသပ်ပြီး ပို့စ်တွေ တင်တာပါ...။
ကျွန်တော်ကတော့ လောလောဆယ် ကိုယ် အာရုံကျတာကို တင်ဖြစ်တာပါ...။
ခံယူပုံချင်း ကွာလို့ပါ...။ ကျွန်တော်က အမ်းမားလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့တော့ satire ဆန်ဆန် မရေးတတ်ဘူးဗျ...။
ကိုယ်ရေးနေတာ ဟာသတစ်ပုဒ်ဆိုတာ စာဖတ်သူကို ဟီးဟီးဟားဟားတွေ ထည့်ပြီး အသိပေးနေရတဲ့... ကွေးလေးငှက်င်ယ သနားစဖွယ် အဆင့်ပါဗျာ...။
Ko Boyz November 16, 2008 at 3:19 AM
ksancuang ရေ...။ အဟက်...။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာကို ဆုပ်မိတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ...။
ကျွန်တော်က တုံးခုလို့ လှမ်းမမှီတဲ့ စပျစ်သီးကို ချဉ်တယ်လို့ စွပ်စွဲပြီး မစားလိုက်ရတဲ့ အမဲခြောက်ကို သဲနဲ့ လိုက်ပက်နေတဲ့... အရူး တစ်ယောက်ပါဗျာ...။
သံပုရာသီးတစ်ပိုင်း/ ပါပီတစ်ပိုင်းပါဗျာ... ကြီးလေချဉ်လေ၊ ရုပ်ဆိုးလေတဲ့ အမျိုး...။
ကိုပေါ November 16, 2008 at 12:06 PM
Ko Boyz November 16, 2008 at 12:15 PM
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်က သိမ်းထားတဲ့ draft ကို ပြန်လည် ဝေငှတာပါ...။
:P November 16, 2008 at 1:30 PM
ကိုBoyz နဲ့ မမKOM..ကိုင်းညွတ်နေသော စပါးနှံ ၂ ခုပါတကားးးးး
Ko Boyz November 16, 2008 at 1:32 PM
ဆင်ဒဏ်လားရယ်...။ မြန်မြန် အရိတ်ခံရတာပေါ့.. ဟတ်လား...။ :D
NangNyi November 17, 2008 at 12:28 PM